IKashiwa, ecaleni kodederhu lweevenkile, imizuzu engama-30 ukuya eTokyo, imithombo eshushu yendalo ekufuphi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguハルミ
Indawo yokuhlala entsha, ekhuselekileyo nelula, iyadi. Kukho iivenkile ezintandathu, Pharmacy, kunye kudederhu lweevenkile enkulu ekufutshane, kwakunye neevenkile ezine ezinkulu zombane. ZeBarbercue yangaphandle ehlotyeni, umnini kwiziko yasentwasahlobo eshushu yendalo ithathe ukuba bakhululeke , phulaphula kubugcisa Japanese kunye nokwenziwa kwemisebenzi. kwakhona elula kakhulu ngok ukuya kummandla eTokyo. le ndoda iza kunika ingcaciso efanelekileyo. Namkelekile. eli gumbi kukho ikhitshi evulekileyo, igumbi lokuhlala elikhulu, kunye eyahlukileyo One Japanese -style igumbi, 3 amagumbi Western-style, yokuhlambela eyahlukileyo, wamkelekile ukuba uze uhlale.
Eyakhe indlu enamagumbi amane okulala kunye negumbi lokuhlala eli-1, ikhitshi elivulekileyo, elineyadi, kunye nenjana yesilwanyana.Indlu + iyadi imalunga ne-150 square metres, indawo ivulekile, kwaye ilanga lilungile. inxaxheba kushishino zonyango kunye nokhenketho Japanese, Yonke imali kukhutshwa invoyisi inkampani, ukhuseleko liqinisekisiwe.
Igumbi lokuhlala elisulungekileyo elinesimo esiphakamileyo saseJapan, ayipheleli nje ekubeni kubekho indlu eyakhiweyo, kukho imarike yaseJapan eqhelekileyo, kukho nepaki apho unokuhamba khona.Yindawo eqhelekileyo yohlobo lwaseJapan.
Umbuki zindwendwe ngu- ハルミ
Ngaba ukwazisa imeko yendawo
Ukuba ufuna uncedo, unako
Ukuba kukho ixesha elininzi kakhulu, kunokufuneka ukuba ibe yinkonzo esekelwe kwintlawulo
Inombolo yomthetho: M120025625
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$220
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kashiwa-shi